Hawl Kasta Hubsiimo Ku Qabo - Xogside-news Xogside
Home BARNAAMIJYADA Hawl Kasta Hubsiimo Ku Qabo
Hawl Kasta Hubsiimo Ku Qabo
Xogside – James Robert Scott waxa uu dhashay bishii Novemebr 20, sanadkii 1969. James oo Maraykan ah ayaa sanadkii 1993 ka tegay magaaladii u degenaa isagoo saxiibadii u raacay magaalo kale oo ku xigtay laakiin waxa u dhexeeyay webi lagu xidhay derbi.
Scott waxa uu doonayay inuu saxiibadii la joogo magaladaasi dhowr maalmood, sidaa awgeed derbiga ayuu meel yar ka dalooliyay si uu gabadhiisa ugu sheego in wadadii uu daad xidhay oo aanay jirin meel uu ka soo noqdaa.
Laakiin derbigii uu dalooliyay ayay biyihii marba marka ka danbaysa si ballaadhiyeen taasi oo keentay ugu danbaystii inuu dhaco oo ku fataho goobo ballaadhan oo qiyaas ahaan gaadhaya 130 Km2 , daadka ayaa baabiiyay biriishiyo iyo guryo ay dadkii degenaa ka qexeen dadka awgiis..
Dadkaasi ayaa xataa soo jiidhay goobo xabaalo ahayd oo soo saaray maydkii ku aasna. Dawladda Maraykanka oo baadhis weyn ku samaysay sababta shilka fatahaada webigu u dhacay aya ugu danbaystii ogaatay ninka falkan geystay inuu yahay Scott, markii loo xidhayna si dhib yar ayuu denbiga uga qirtay maxkamadda iyo weliba ujeedada uu ka lahaa.
Maxkamadda ayaa ku xukuntay 20 sano oo xadhig ah waxaana lagu xidhay Jeelka Massive Dadka webigaa ka soo butaacay ayaa loo yaqaan daadkii Massive (Massive Flood). Scott waxa uu doonayay inuu been gabadhiisa kaga badbaado laakiin waxa uu ku galay denbi weyn cabsida uu ka qabay gabadhiisa.
Previous articleXikmadaha nolosha
Next articleDhulka Si Deggan U Tallaabso